ရေးသားသူ may16 at Friday, August 20, 2010
မိုးစက်အိမ် August 20, 2010 at 9:06 PM
အလွန်တန်ဖိုးရှိပါတယ် ဇွဲသမား ချုံကိုမော
ကြီးပန်းကြီးတိုးတာကိုတော့ သဘောကျမိပါရဲ့ 
သူမှာဇွဲရှိရက်နဲ့ ထင်သလောက် ခရီးမပေါက်ဘူး
ဖြစ်နေတယ် ဥာဏ်ကိုမစဉ်းစားတာလား အသုံး
မချတတ်တာလားတော့ စဉ်းစားစရာဘဲဗျ . . .
တင်ပြတဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တင်ပြပုံက နည်းနည်းအကြမ်းထည်ဆန်နေသလားလို့ပါ။ နည်းနည်းလေး ဖွဲ့ ဖွဲ့ နွဲ့ နွဲ့ နဲ့ ရှည်ရှည်လေး စိတ်ဝင်စားအောင် ရေးမယ်ဆိုရင် ပိုကောင်းမယ်လို့ ယူဆပါတယ်ခင်ဗျာ။ မိမိရဲ့ အမြင်သာဖြစ်ပါတယ်။
YoungGun August 20, 2010 at 11:06 PM
ကံ မရှိ၊ ဥာဏ်ရှိတိုင်း မွဲ..ဆိုတာကျ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ မသိဘူးဗျာ။ ကံဆိုတာ အလုပ်တဲ့။ ဘာတွေမှန်းကို မသိတော့ပါဘူး။ သိထားတာကတော့ ပါရမီ၊ ဘဝအဆက်ဆက် အထုံအကျက်ရှိခဲ့သူကို ဥာဏ်သမားရော၊ ဝီရိယသမားပါ ဘယ်လိုမှ လိုက်မမီတာပါပဲ။
vzty109 August 21, 2010 at 7:34 AM
ဥာဏ် နဲ့ ယှဉ် ကာ ....ယူ သုံး သွား ပါတယ်..
ကိုးကောင် + တစ်ကောင် + တစ်ကောင် = ?
ငါးရက် + (ကံ၊ဥာဏ်၊ဝီရိယ) = ?
ပျော်ရွှင်စွာဖြင့် စာ ကောင်းပေမွန် ဗဟုသုတ ရဖွယ် များ ဆက်လက် ရေး သား နိုင် ပါစေ။
march August 22, 2010 at 12:15 AM
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) August 22, 2010 at 1:21 AM
ကံဥာဏ်ဝိရိယ ၃ခုပေါင်းရင်တော့ အောင်မြင်မှုရဖို့ သေချာမှာပါ။
မြစ်ကျိုးအင်း August 23, 2010 at 3:20 PM
အားလုံး ပြည့်စုံရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။
အနည်းဆုံး ဝရိယနဲ့ ညဏ်ရှိရင်တောင် အဆိုးတော့ မဖြစ်လောက်ဘူး ထင်တယ်။